ဘ၀ ရည်ရွယ်ချက် အစစ်အမှန်ကို တွေ့ရှိနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၅)ခု – Gentleman Magazine
ယှဉ်ပြိုင်မှုများလှတဲ့ ယနေ့ခေတ်မှာ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေ လုပ်ဆောင်ရင်းအချိန်ကုန်သွားဖို့က လွယ်ပါတယ်။ တစ်နေ့လုံး အလုပ်တွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ဆောင်ရင်း တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ အချိန်တွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲ အံ့အားသင့်နေမိလောက်အောင်ကို အလုပ်များပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အခြားလူတွေလိုပဲ ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ကို မေ့လျော့သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလို အတောမသတ်လည်ပတ်နေတဲ့ အလုပ်သံသရာထဲကနေ ထွက်ပြီး သင့်ဘ၀ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် အစစ်အမှန်ကို သိနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်း(၅)ခု ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ အာရုံများစရာတွေကိ လျှော့ချပါ။
သင့်ဘ၀ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ကို ရှာတွေ့ဖို့အတွက် ပထမဆုံးအနေနဲ့ အာရုံများစရာတွေကို လျှော့ချဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကို အာရုံမစိုက်နိုင်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဟာ တစ်နေ့ကို အကြိမ်(၁၅၀)လောက် ဖုန်းကို ထုတ်ကြည့်တတ်ကြလို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သာမန်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့ကို (၁၀)နာရီကျော်ကြာအောင် မီဒီယာအမျိုးမျိုးမှာ အချိန်ကုန်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ဆက်သွယ်မှုအရမ်းမြန်ဆန်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ချိတ်ဆက်နေမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက်အရေးကြီးတာတွေကို အာရုံစိုက်ဖို့ ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အတွက် အာရုံများစရာတွေကို အရင်ဆုံးလျှော့ချဖို့က သင့်ဘ၀ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ကို တွေ့ရှိဖို့ သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၂. ပင်ကိုယ် အရည်အချင်းတွေအကြောင်းကို သိပါစေ။
ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းတွေကို သိရှိနားလည်ဖို့ကလည်း သင့်ဘ၀ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ကို သိရှိဖို့ အရေးကြီးတဲ့အဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ မတူကွဲပြားတဲ့ အားသာချက်တွေ၊ အရည်အချင်းတွေနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေရှိကြပါတယ်။ သင့်မှာလည်း ကမ္ဘာလောကကြီးကို ချပြဖို့အတွက် ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ သင့်မှာ ရှိပြီးသားအားသာချက်တွေကို ထုတ်ဖော်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီအားသက်ချက်တွေကို အမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်တဲ့အထိ လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်အားသာချက်တွေကို ထုတ်ဖော်အသုံးချနိုင်ပြီဆိုရင် ပိုကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်တွေ ထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက် သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာ၊ စိတ်နှလုံးက လှုံ့ဆော်တဲ့အရာ ဘာလဲဆိုတာကို အာရုံစိုက်သတိထားကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၃။ အလုံးစုံအဆင်ပြေတဲ့ အခြေအနေကထွက်ပြီး ကြိုးစားပါ။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိစ္စတွေကိုပဲ လုပ်နေမယ်ဆိုရင် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှု အားနည်းလာပါလိမ့်မယ်။ အခုချိန်မှာ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀မှာ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေ မရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားနေရရင် သင့်ဘ၀မှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအလုံးစုံအဆင်ပြေနေတဲ့ အခြေအနေကနေ ထွက်ကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်လာပြီး အကောင်းဆုံးဘ၀မှာနေနိုင်ဖို့အတွက် လက်ရှိအဆင်ပြေနေတဲ့ ပုံမှန်အခြေအနေကနေ တဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ရုန်းထွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဘ၀ကနေ ရုန်းထွက်ပြီး သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာတွေ၊ လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ငွေကြေး၊ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်မဟုတ်ပဲ လုပ်ချင်တာကို လုပ်နေရင်း ငွေကြေးရော၊ ဂုဏ်သိက္ခာပါ အလိုလိုရရှိလာတဲ့အထိ ကြိုးစားပါ။ ဒီလိုဆိုရင် သင့်ဘ၀ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ကို တွေ့ရှိဖို့ နီးစပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ အကြီးကြီးတွေးတတ်အောင် လေ့လာပါ။
လူအများစုက သူတို့ဘ၀ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေထက် နိမ့်ပါးတဲ့ဘ၀မှာ ရှင်သန်နေကြရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ အကြီးကြီးမတွေးတတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ မာသာထရီစာသာ သူတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေလို့ ဆင်းရဲသားတွေကို မကူညီနိုင်လောက်ပါဘူးလို့ တွေးမိရင်၊ ဝေါ့ဒစ်စနေးသာ သူ့အိပ်မက်က ရူးကြောင်ကြောင်နိုင်ပြီး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့ရင် အခုလို သမိုင်းတွင်မယ့် အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ ခံယူချက်ကို အရင်ပြောင်းလဲပြီး အကောင်းဆုံး၊ အဓိပ္ပါယ်အပြည့်ဝဆုံး၊ ဆန္ဒအရှိဆုံး ဘ၀တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပါ။ သင့်ပြောင်းလဲမှုက လောကကြီးကို သက်ရောက်မှာသေချာပါတယ်။ ကြီးကြီးတွေးတတ်အောင် သင်ယူပါ။
၅။ ဒါပေမယ့် နေ့တိုင်း ခြေလှမ်းအသေးလေးတွေကနေ စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။
အပေါ်က အခက်တွေကိုဖတ်ပြီး သင့်ဘ၀ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အမှန်ကို တွေ့ရှိဖို့အတွက်ဆိုပြီး လူသူဝေးတဲ့ ကျွန်းတစ်ခုပေါ်မှာ သွားနေစရာမလိုပါဘူး။ နောက်တစ်နေ့ မနက်မှာ သူဌေးရုံးခန်းထဲသွားပြီး အလုပ်ထွက်တဲ့အကြောင်း ပြောစရာမလိုပါဘူး။ ဘ၀ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှာဖွေဖို့ စီမံကိန်းတစ်ခုချပြီး စုဆောင်းထားတဲ့ ငွေတွေကုန်သွားအောင် သုံးစရာမလိုပါဘူး။ သင့်ဘ၀ ရည်ရွယ်ချက်အစစ်အမှန်ကို တွေ့ရှိဖို့အတွက် အဆင့်ငယ်လေးတွေကနေ စတင်လို့ရပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်နေရာကနေ လိုအပ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးတွေကို တဆင့်ချင်းလုပ်ဆောင်ရင်း ကွဲပြားခြားနားမှုကို ရရှိလာမှာပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့ ကြိုးစားပြောင်းလဲနေမယ်ဆိုရင် သင့်ဘ၀ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို တွေ့ရှိဖို့ ပိုပြီးနီးစပ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝ ရညျရှယျခကျြ အစဈအမှနျကို တှရှေိ့နိုငျဖို့ နညျးလမျး(၅)ခု
ယှဉျပွိုငျမှုမြားလှတဲ့ ယနခေ့တျေမှာ တဈနတေ့ာလုပျငနျးတာဝနျတှေ လုပျဆောငျရငျးအခြိနျကုနျသှားဖို့က လှယျပါတယျ။ တဈနလေုံ့း အလုပျတှကေို တဈခုပွီးတဈခုလုပျဆောငျရငျး တဈနတေ့ာကုနျဆုံးသှားတဲ့အခါမှာ အခြိနျတှေ ဘယျရောကျသှားလဲ အံ့အားသငျ့နမေိလောကျအောငျကို အလုပျမြားပါတယျ။ နောကျဆုံးမှာတော့ အခွားလူတှလေိုပဲ ကိုယျ့ဘဝရဲ့ရညျရှယျခကျြအစဈအမှနျကို မလြေ့ော့သှားတတျပါတယျ။ ဒီလို အတောမသတျလညျပတျနတေဲ့ အလုပျသံသရာထဲကနေ ထှကျပွီး သငျ့ဘဝရဲ့ရညျရှယျခကျြ အစဈအမှနျကို သိနိုငျဖို့ နညျးလမျးကောငျး(၅)ခု ကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ အာရုံမြားစရာတှကေိ လြှော့ခပြါ။
သငျ့ဘဝရဲ့ရညျရှယျခကျြအစဈအမှနျကို ရှာတှဖေို့အတှကျ ပထမဆုံးအနနေဲ့ အာရုံမြားစရာတှကေို လြှော့ခဖြို့ လိုအပျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့အားလုံးဟာ အရေးကွီးတဲ့ကိစ်စတှကေို အာရုံမစိုကျနိုငျအောငျ ဆှဲဆောငျနိုငျတဲ့အရာတှနေဲ့ အဆကျမပွတျတိုကျခိုကျခံနရေပါတယျ။ လလေ့ာမှုတှအေရ အမရေိကနျနိုငျငံသားတှဟော တဈနကေို့ အကွိမျ(၁၅၀)လောကျ ဖုနျးကို ထုတျကွညျ့တတျကွလို့ ဆိုပါတယျ။ နောကျတဈခုက သာမနျအမရေိကနျနိုငျငံသားတဈယောကျဟာ တဈနကေို့ (၁၀)နာရီကြျောကွာအောငျ မီဒီယာအမြိုးမြိုးမှာ အခြိနျကုနျနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
သငျ့အနနေဲ့ ဆကျသှယျမှုအရမျးမွနျဆနျတဲ့ ကမ်ဘာကွီးနဲ့ ခြိတျဆကျနမေယျဆိုရငျ သငျ့အတှကျအရေးကွီးတာတှကေို အာရုံစိုကျဖို့ ခကျခဲနပေါလိမျ့မယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့အတှကျ အာရုံမြားစရာတှကေို အရငျဆုံးလြှော့ခဖြို့က သငျ့ဘဝရဲ့ ရညျရှယျခကျြအစဈအမှနျကို တှရှေိ့ဖို့ သော့ခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။
၂. ပငျကိုယျ အရညျအခငျြးတှအေကွောငျးကို သိပါစေ။
ပငျကိုယျအရညျအခငျြးတှကေို သိရှိနားလညျဖို့ကလညျး သငျ့ဘဝရဲ့ရညျရှယျခကျြအစဈအမှနျကို သိရှိဖို့ အရေးကွီးတဲ့အဆငျ့တဈခုဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့အားလုံးဟာ မတူကှဲပွားတဲ့ အားသာခကျြတှေ၊ အရညျအခငျြးတှနေဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေးတှရှေိကွပါတယျ။ သငျ့မှာလညျး ကမ်ဘာလောကကွီးကို ခပြွဖို့အတှကျ ထူးခွားခကျြတဈခုရှိပါတယျ။ သငျ့မှာ ရှိပွီးသားအားသာခကျြတှကေို ထုတျဖျောနိုငျမယျဆိုရငျ ဒီအားသကျခကျြတှကေို အမွငျ့မားဆုံးစှမျးဆောငျရညျဖွဈတဲ့အထိ လုပျဖို့အခှငျ့အရေးရလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပငျကိုယျအားသာခကျြတှကေို ထုတျဖျောအသုံးခနြိုငျပွီဆိုရငျ ပိုကွီးမားတဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ၊ လုပျဆောငျခကျြတှကေို လုပျဆောငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ပငျကိုယျစှမျးရညျတှေ ထှကျပျေါလာဖို့အတှကျ သငျ့ကို ပြျောရှငျစတေဲ့အရာ၊ စိတျနှလုံးက လှုံ့ဆျောတဲ့အရာ ဘာလဲဆိုတာကို အာရုံစိုကျသတိထားကွညျ့ဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၃။ အလုံးစုံအဆငျပွတေဲ့ အခွအေနကေထှကျပွီး ကွိုးစားပါ။
နစေ့ဉျနတေို့ငျး လုပျရိုးလုပျစဉျကိစ်စတှကေိုပဲ လုပျနမေယျဆိုရငျ စိတျဓာတျတကျကွှမှု အားနညျးလာပါလိမျ့မယျ။ အခုခြိနျမှာ သငျ့ရဲ့နစေ့ဉျဘဝမှာ ရညျရှယျခကျြကောငျးတှေ မရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားနရေရငျ သငျ့ဘဝမှာ ပွောငျးလဲမှုတှေ လုပျဖို့ လိုအပျနပွေီဖွဈပါတယျ။ လကျရှိအလုံးစုံအဆငျပွနေတေဲ့ အခွအေနကေနေ ထှကျကွညျ့ပါ။ သငျ့ရဲ့အကောငျးဆုံးဗားရှငျးဖွဈလာပွီး အကောငျးဆုံးဘဝမှာနနေိုငျဖို့အတှကျ လကျရှိအဆငျပွနေတေဲ့ ပုံမှနျအခွအေနကေနေ တဆငျ့ပွီးတဈဆငျ့ ရုနျးထှကျဖို့လိုအပျပါတယျ။ ပုံမှနျဘဝကနေ ရုနျးထှကျပွီး သငျ့ကိုပြျောရှငျစမေယျ့အရာတှေ၊ လုပျခငျြတဲ့အရာတှကေို လုပျဆောငျပါ။ ငှကွေေး၊ ဂုဏျသိက်ခာအတှကျမဟုတျပဲ လုပျခငျြတာကို လုပျနရေငျး ငှကွေေးရော၊ ဂုဏျသိက်ခာပါ အလိုလိုရရှိလာတဲ့အထိ ကွိုးစားပါ။ ဒီလိုဆိုရငျ သငျ့ဘဝရဲ့ ရညျရှယျခကျြအစဈအမှနျကို တှရှေိ့ဖို့ နီးစပျလာမှာဖွဈပါတယျ။
၄။ အကွီးကွီးတှေးတတျအောငျ လလေ့ာပါ။
လူအမြားစုက သူတို့ဘဝရဲ့ ဖွဈနိုငျခထြေကျ နိမျ့ပါးတဲ့ဘဝမှာ ရှငျသနျနကွေရပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈရတာဟာ အကွီးကွီးမတှေးတတျလို့ဖွဈပါတယျ။ မာသာထရီစာသာ သူတဈယောကျတညျးဖွဈနလေို့ ဆငျးရဲသားတှကေို မကူညီနိုငျလောကျပါဘူးလို့ တှေးမိရငျ၊ ဝေါ့ဒဈစနေးသာ သူ့အိပျမကျက ရူးကွောငျကွောငျနိုငျပွီး မဖွဈနိုငျဘူးလို့ ထငျခဲ့ရငျ အခုလို သမိုငျးတှငျမယျ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိခဲ့မှာမဟုတျပါဘူး။ သငျ့ရဲ့ ခံယူခကျြကို အရငျပွောငျးလဲပွီး အကောငျးဆုံး၊ အဓိပ်ပါယျအပွညျ့ဝဆုံး၊ ဆန်ဒအရှိဆုံး ဘဝတဈခုကို တညျဆောကျပါ။ သငျ့ပွောငျးလဲမှုက လောကကွီးကို သကျရောကျမှာသခြောပါတယျ။ ကွီးကွီးတှေးတတျအောငျ သငျယူပါ။
၅။ ဒါပမေယျ့ နတေို့ငျး ခွလှေမျးအသေးလေးတှကေနေ စတငျလုပျဆောငျပါ။
အပျေါက အခကျတှကေိုဖတျပွီး သငျ့ဘဝရဲ့ ရညျရှယျခကျြအမှနျကို တှရှေိ့ဖို့အတှကျဆိုပွီး လူသူဝေးတဲ့ ကြှနျးတဈခုပျေါမှာ သှားနစေရာမလိုပါဘူး။ နောကျတဈနေ့ မနကျမှာ သူဌေးရုံးခနျးထဲသှားပွီး အလုပျထှကျတဲ့အကွောငျး ပွောစရာမလိုပါဘူး။ ဘဝရညျရှယျခကျြကို ရှာဖှဖေို့ စီမံကိနျးတဈခုခပြွီး စုဆောငျးထားတဲ့ ငှတှေကေုနျသှားအောငျ သုံးစရာမလိုပါဘူး။ သငျ့ဘဝ ရညျရှယျခကျြအစဈအမှနျကို တှရှေိ့ဖို့အတှကျ အဆငျ့ငယျလေးတှကေနေ စတငျလို့ရပါတယျ။ ပုံမှနျအတိုငျးလညျပတျနရောကနေ လိုအပျတဲ့ပွောငျးလဲမှုလေးတှကေို တဆငျ့ခငျြးလုပျဆောငျရငျး ကှဲပွားခွားနားမှုကို ရရှိလာမှာပါ။ နစေ့ဉျနတေို့ငျး ရညျရှယျခကျြတဈခုနဲ့ ကွိုးစားပွောငျးလဲနမေယျဆိုရငျ သငျ့ဘဝရဲ့ ရညျမှနျးခကျြကို တှရှေိ့ဖို့ ပိုပွီးနီးစပျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous: ရည်းစားဟောင်းက ချစ်သူသစ်ရနေကြောင်း သိလိုက်ရသောအခါ……
Next: အောင်မြင်မှုအတွက် လိုအပ်သည့် စာရင်း(၁၀)ခု